LERIVA MANAHIRANA : TSY HO ELA DIA HO RAVA IO FITONDRANA IO – MyDago.com aime Madagascar
Aoka izay tsy mety rehetra avela any amin’ny taona 2012 hoy ny Cst Leriva Manahirana androany teny amin’ny Magro Behoririka. Raha misy ny adiady hoy izy tamintsika dia aoka hivalona miaraka amin’ny taona 2012 izany. Fisainana vaovao no entina miatrika ny taona vaovao 2013. Izay zavatra rehetra tsy nitovy fijery dia aoka hivalona any . Ny ekipan-dRajoelina hoy izy no tena fahavalontsika izay nampijaly vahoaka ka tsy isika indray no hifanipaka an-toerana. Na dia tsy hitantsika mivaingana aza ny asan’ny Cst sy CT hoy Leriva, dia misy ny fivoriana atsy sy aroa atao. Matoa ireo nanongana an’i Dada tao amin’ireo andrim-panjakana ireo niova fiteny, dikan’izany dia niasa ny Cst sy Ct. Raha taty ivelan’ny fitondrana isika hoy ity mpanao politika ity dia tsy nahavita inona. Ireo nivory ao dia ahitana fa tsy ho ela dia ho rava io fitondrana io. Kely sisa hoy Leriva dia tonga ilay fandresentsika izay miankina amiko sy ianao. Rehefa miray saina sy fo isika dia tsy ho ela dia ho tonga ny filoha Ravalomanana Marc. Mato hoy izy nivory tsy ankiato ny Sadc sady matetika, ka tafiditra amin’izany i Madagasikara dia ao raha. Tsy adala ny fikambanana iraisam-pirenena hoy ity olomboantendry avy any Brickaville ity ka hanao eny androany ary tsia rahampitso.Rehefa niteny izy ireohoe ampiharina ny andininy voalohany ka hatramin’ny farany dia tsy maintsy atao. Ny tenin’ny ambasady Alemana iny hoy Leriva dia tsotra fa ny fikambanana iraisam-pirenena dia tsy hanameloka ny filatsahan’ny filoha Ravalomanana Marc izay voafidim-bahoaka, raha milatsaka i Rajoelina tsy voafidim-bahoaka. Izay no hananantsika fanantenana hoy Leriva fa ny filoha Ravalomanana Marc dia madio eo anatrehan’ny fikambanana iraisam-pirenena. Manàna fanantenana hoyizy ary mahatoky ny fahendrentsika rehetra amin’izany. Izay rehetra toromarika rehetra nivoaka avy any amin’i Dada dia hakantoavintsika ary na misy vola na tsy misy tsy miala amin’ny filoha Ravalomanana Marc isika.
Auteur Solo Razafy*Publié le 10 janvier 2013 11 janvier 2013 Catégories Politique
1 réflexion sur « LERIVA MANAHIRANA : TSY HO ELA DIA HO RAVA IO FITONDRANA IO »
Tsara vakiana mitsy !!!
Précédent Article précédent : Rakotoarivelo Mamy :Tsy hisy fifidianana eto raha tsy ampiharina amin’ny an-tsipiriany ny tondrozotra
Suivant Article suivant : TSY MANAKAMBO RAJOELINA